भारतीय दूतावास अगाडि सत्तारुढ विद्यार्थीको नारा- लिपुलेक हाम्रो हो, ‘कालापानी हाम्रो हो’ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
भारतीय दूतावास अगाडि सत्तारुढ विद्यार्थीको नारा- लिपुलेक हाम्रो हो, ‘कालापानी हाम्रो हो’
प्रकाशित मिति २२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १२:५६ लेखक Sabita Roka
काठमाडौं । भारतले नेपाली भूभाग मिचेको विरोधमा विद्यार्थीहरुले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास केन्द्रित विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । शुक्रबार सत्तारुढ नेकपा सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले पनि लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
कञ्चनरुप नगरपालिकालाई स्वाइन फ्लु र हङकङ फ्लुग्रस्त विपद् क्षेत्र घोषणा
काठमाडौं । प्रकोप नियन्त्रण नहुन्जेलसम्मका लागि सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका क्षेत्रलाई विपद् क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार…
काठमाडौं । अर्धसैनिक प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षा, सशस्त्र विद्रोह निस्तेज पार्न र विपत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको…
तपाई बस्दा खुुट्टा हल्लाइरहनुु हुुन्छ ? लगातार खुट्टा हल्लाउँदा हृदयघात हुनसक्छ !
काठमाडौं । तपाइ बस्दा खुुट्टा हल्लाइरहनुु हुुन्छ ? यदि यस्तो बानी…
कात्तिकबाट यसरी हुनेछ कर्मचारी समायोजन, निजामति सेवा ऐनमा समस्या
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अवरुद्ध रहेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया आगामी कात्तिकबाट सुरु हुने जनाएको छ ।